၂၇.၁၂.၂၀၁၁ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၂၇.၁၂.၂၀၁၁ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များ
၂၇.၁၂.၂၀၁၁ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များ
Posted by မောင် ပေ on Dec 27, 2011 in Creative Writing, Hobbies & Games |5comments
မင်္ဂလာပါ သပ္ပူရိသ စာချစ်သူ စာဖတ်သူ အပေါင်းတို့ ။
ဒီနေ့ ညမှာ ကန်ကြမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲသုံးပွဲအကြောင်း ကို ရေးပြချင်ပါတယ် ။
မနေ့ တုန်းကတော့ ၊ အသင်းကြီး ၃သင်း ခန့် မှန်းခဲ့ရာမှာ ၊ မန်ယူ တစ်သင်းထဲသာ အပြည့်အဝ လုပ်ကျွေးသွားခဲ့ပြီး ၊ ကျန်နှစ်သင်း က သရေ ဘဲ ခတ်သွားခဲ့လို့ ၊ အားပေးသူများ နစ်နာခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီကနေ့ ည ပွဲစဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံး စဉ်းစားကြည့်မိရာ…
အာဆင်နယ် (၅) – ဝုဗ် (၁၇) “ည ၉း၃၀”
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၁၇ပွဲကန်အပြီးမှာ ၁၀ နိုင် ၊ ၂ သရေ ၊ ၅ ရှုံး ၊ ရဂိုး၃၃ ပေးဂိုး၂၅ ၊ ၃၂မှတ်
ဝုဗ် အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၁၇ပွဲကန်အပြီးမှာ ၄ နိုင် ၊ ၃ သရေ ၊ ၁၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၉ ပေးဂိုး၃၂ ၊ ၁၅မှတ်
အာဆင်နယ် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
ဝုဗ် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ သရေ ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး
အာဆင်နယ် အိမ်ကွင်းတွင် ဝုဗ် နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
၁၂.၂.၂၀၁၁ အာဆင်နယ် ၂-၀ ဝုဗ်
၃.၄.၂၀၁၀ အာဆင်နယ် ၁-၀ ဝုဗ်
ဈေးအနေအထားအရ အာဆင်နယ်ပရိသတ်များအတွက် ၂ဂိုးဆိုလျှင် ခပ်ပါးပါး အကျိုးရှိမည် ။
အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှူး ဗန်ပါစီ သည် ၂၀၁၁ အတွင်းကစားခဲ့သော ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲများတွင် သွင်းဂိုး၃၄ဂိုး ရှိပြီ ဖြစ်သည် ။ ယခု ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၇ အပြီးတွင် သွင်းဂိုး၁၆ ဂိုး ဖြင့် ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်သည် ။
ယခုရာသီ အာဆင်နယ် အိမ်ကွင်း၈ပွဲကစားခဲ့ရာ လီဗာပူး တစ်သင်းကိုသာ ရှုံးခဲ့ပြီး ၊ ၆ ပွဲ နိုင် ၊ ၁ ပွဲ သရေ ။
ဝုဗ် အသင်း မှာ အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲ ၁ ပွဲသာ ရှိပြီး ၁ သရေ ၊ ၆ ရှုံး
ချဲဆီး အသင်း က ၁၈ပွဲကစားအပြီး ၃၄ မှတ် နှင့် အဆင့်၎ နေရာတွင် ဖြစ်သဖြင့် ယခုပွဲကို အာဆင်နယ် အနိုင်ကစားလျှင် အဆင့်၎နေရာ ကို ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည် ။
ဆိုတော့ ဒီနေ့ ပွဲ ကို အာဆင်နယ် အနိုင်ကစားမည် မှာ သေချာသည် ။
ဗန်ပါစီ ဂိုးပေါက်စောတွေ့ လျှင် ပရိသတ်များ လိုအပ်သည့် ဂိုးအရေအတွက် ကို ရရှိမည် ။
ယခုပွဲအတွက် သည်လို ဘဲ ပြောချင်ပါသည် ။
“““ အာဆင်နယ် ၃-၀ ဝုဗ် ”””
ဆွမ်ဆီး (၁၅) – ကျူပီအာ (၁၆) “ ည ၁၁:၃၀ ”
ဆွမ်ဆီး ပရီးမီးယားလိဂ်၁၇ပွဲကန်အပြီး ၄ နိုင် ၊ ၆ သရေ ၊ ၇ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၆ ပေးဂိုး၂၁ ၊ ၁၈မှတ်
ကျူပီအာ ပရီးမီးယားလိဂ်၁၇ပွဲကန်အပြီး ၄ နိုင် ၊ ၄ သရေ ၊ ၉ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၇ ပေးဂိုး၃၁ ၊ ၁၆မှတ်
ဆွမ်ဆီး ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ ရှုံး ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ သရေ
ကျူပီအာ ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ သရေ ၊ ရှုံး
ဈေးအနေအထားအရ သရေဆိုလျှင် ဆွမ်ဆီး တစ်ဝက် ဆုံးရှုံးမည် ။
ဂိုးပေါင်းဈေးမှာ နှစ်ဂိုးဆိုလျှင် အပြည့်ဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်သည် ။
ယခုပွဲကို “““ ဂိုးပေါင်း အနည်း ””” ရွေးလျှင် သာယာမည် မှာ အမှန်ပင် ။
နော့ဝစ် (၁၁) – စပါး (၃) “ ည ၂း၀၀ နာရီ ”
နော့ဝစ် ပရီးမီးယားလိဂ်၁၇ပွဲကန်အပြီး ၅ နိုင် ၊ ၆ သရေ ၊ ၆ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂၇ ပေးဂိုး၃၁ ၊ ၂၁မှတ်
စပါး ပရီးမီးယားလိဂ်၁၆ပွဲကန်အပြီး ၁၁ နိုင် ၊ ၂ သရေ ၊ ၃ ရှုံး ၊ ရဂိုး၃၂ ပေးဂိုး၁၉ ၃၅မှတ်
နော့ဝစ် ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ သရေ ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
စပါး ယခုပွဲမတိုင်ခင် ကန်ခဲ့သောငါးပွဲရလဒ်များမှာ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
ဈေးအနေအထားအရ စပါး တစ်ဂိုးဆိုလျှင် အပြည့်နီးပါး အမြတ်ရမည် ။
နော့ဝစ် ၊ စပါး ကို နောက်ဆုံး နိုင်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ က စပါး အိမ်ကွင်း တွင် ဖြစ်ပြီး နော့ဝစ် က ၃-၁ ဖြင့် နိုင်ခဲ့သည် ။
စပါး ကို “ မာတင်ဂျိုး ” နည်းပြခဲ့စဉ် က နော့ဝစ်ကွင်းတွင် ၂-၀ ဖြင့် နိုင်ခဲ့သည် ။
စပါး သည် လက်ရှိတွင် အဆင့်၎ နေရာ မှ ချဲဆီး ထက် ၂ ပွဲလျှော့ ၊ ၁မှတ် အသာဖြင့် အဆင့် ၃ နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသောကြောင့် ၊ ယခုအဆင့်၃ နေရာ ကို ရာသီကုန်သည့် အထိ ထိန်းသိမ်းဖို့ ဆိုလျှင် ၊ အနိုင်ကစားဖို့ လိုသည် ။
ယခုပွဲတွင် နှစ်သင်း စလုံး ဂိုးအပြန်အလှန် သွင်းကြသည် ကို တွေ့ မြင်ရနိုင်ပြီး ၊ အနိုင်ဆိုပါက ခြေစွမ်းပိုကောင်းသော စပါး အသင်း ဘဲ ဖြစ်မည် ဟု ပြောချင်ပါသည် ။
——- ဖိုက်တာအားလုံး နှစ်ကူးအချိန်ကာလ မှာ အောင်မြင်ရွှင်လန်းကြပါစေ ——-
ပြောသားပဲ မနေ့ က
ဒီနေ. အိမ်ကွင်းကြီးဘဲဗျာ… စပါးက လင်နွန် နဲ. ဂါရက်ဘေး
မပါဘူးမဟုတ်လား…. အိမ်ကွင်းကြီးဘဲ ၃ ပွဲဆိုရင်အရုံးမရှိနိုင်ဘူး
အာဆင်နယ် ၃-၀ ဝုဗ်
ဆွမ်စီး ၁-၀ ကျူပီအာ
နော့ဝစ် ၁-၂ စပါး
အိမ်ကွင်းမှာ ၀ုဗ်လိုအသင်းကို 1-1 တဲ့
အဲဒါတောင် ပြီးခါနီး ၀ုဗ်က
ကျုပ်တို့များ ဘောက်ဆင်ဒေး ကံမလိုက်လို့
အ၀င်းက လုပ်ရက်တယ် လုပ်ရက်တယ်…
ညက အာကြီး ကြောင့်ကံဆိုးတော့ မလို့ ..စပါး စိုက်လိုက်တာမှန်သွားတယ်..
ကျေးဇူးတင် တယ် ကိုရက်နပ်..